Enti Yehowa Adansefo Gye Yesu Di? | Nkɔmmɔbɔ
Ɔwɛn-Aban | May 2014
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mexican Sign Language Mongolian Moore Myanmar Ndebele Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Peruvian Sign Language Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Russian Sign Language Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
YEHOWA DANSEFO BI NE OBI BƆ NKƆMMƆ
Nkɔmmɔ a edi so yi yɛ nkɔmmɔ a Yehowa Adansefo taa ne nkurɔfo bɔ no bi. Ma yɛmfa no sɛ Ɔdansefo bi a wɔfrɛ no Alfred akɔ ɔbarima bi a wɔfrɛ no Tony fie.
YESU MU GYIDI HO HIA PAA
Alfred: Tony, m’ani agye paa sɛ mahu wo bio.
Tony: Me nso m’ani agye sɛ yɛasan ahyia.
Alfred: Ɔwɛn-Aban ne Nyan! foforo aba, ɛnna mese merebrɛ wo bi. Minim sɛ w’ani begye emu nsɛm no ho paa.
Tony: Meda ase. Me koraa biribi wɔ hɔ a mepɛ sɛ mibisa wo, enti eye sɛ woaba.
Alfred: Saa? Wubetumi abisa.
Tony: Ná me ne obi rebɔ nkɔmmɔ wɔ adwumam na meka kyerɛɛ no sɛ m’ani agye nhoma a nnaano wode brɛɛ me no ho paa. Nanso ɔkae sɛ minnyae kan efisɛ Yehowa Adansefo nnye Yesu nni. Ɛyɛ ampa? Meka kyerɛɛ no sɛ da a wobɛba no, mebisa wo.
Alfred: Woayɛ ade sɛ woabisa me. Wopɛ sɛ wuhu obi gyidi a, gye sɛ wubisa ɔno ara.
Tony: Saa na me nso mihu no.
Alfred: Nea ɛwom ne sɛ, Yehowa Adansefo gye Yesu di paa. Yegye di sɛ Yesu mu gyidi a yebenya so na yɛn nkwagye gyina.
Tony: Me nso saa na na m’adwene yɛ me. Enti m’adamfo no kaa saa no, ɛyɛɛ me naa kakra. Ɛyɛ me sɛ yɛnhyɛɛ da nkaa ho asɛm da.
Alfred: Ma memfa Bible mu nsɛm bi nkyerɛ wo. Ɛma yehu sɛ Yesu mu gyidi ho hia paa, na Yehowa Adansefo taa de yɛ adwuma wɔ asɛnka mu.
Alfred: Ma yɛmfa Yesu ankasa anom asɛm nhyɛ ase. Ɛwɔ Yohane 14:6. Yesu kaa saa asɛm no kyerɛɛ n’asomafo no mu biako. Ɛhɔ kan sɛ: “Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Mene ɔkwan no ne nokware no ne nkwa. Obiara mma Agya no nkyɛn gye sɛ ɔnam me so.’” Sɛnea kyerɛwsɛm yi ka no, yɛpɛ sɛ yɛkɔ Agya no nkyɛn a, dɛn ne ɔkwan biako pɛ a ɛsɛ sɛ yɛfa so?
Tony: Ɛsɛ sɛ yɛfa Yesu so.
Alfred: Ɛno ara ne no. Yehowa Adansefo nso gye saa asɛm no di paa. Ma mimmisa wo: Onyankopɔn ho ade a woasua no kyerɛ wo sɛ obi bɔ Onyankopɔn mpae a, hena din mu na ɛsɛ sɛ ɔde fa?
Alfred: Me ne wo yɛ adwene. Ɛno nti na mpae a mabɔ nyinaa, mabɔ no Yesu din mu no. Saa na Yehowa Adansefo nyinaa bɔ mpae.
Tony: Eye paa.
Alfred: Kyerɛwsɛm foforo a yebetumi asusuw ho ne Yohane 3:16. Saa asɛm no ho hia paa, enti ebinom frɛ no Yesu ho nsɛm a wɔabɔ no mua. Nea wɔrepɛ akyerɛ ne sɛ, obi pɛ sɛ ɔka Yesu asase so asetena ne n’asɛnka adwuma ho asɛm a, Yohane 3:16 ne kyerɛwsɛm a ɛbɔ no tɔfa. Mesrɛ wo, wonkenkan hɔ mma me?
Tony: OK. Ɛhɔ kenkan sɛ: “Na Onyankopɔn dɔ wiase paa ma enti ɔde ne Ba a ɔwoo no koro no mae, na obiara a ɔkyerɛ no mu gyidi no ansɛe na mmom wanya daa nkwa.”
Alfred: Mo! Saa asɛm yi woakan da?
Tony: Yiw, metaa te no nkurɔfo ano, na metaa hu sɛ nkurɔfo akyerɛkyerɛw de abobɔ nneɛma ho wɔ kurom.
Alfred: Ɛyɛ kyerɛwsɛm a nkurɔfo ani gye ho paa. Wosan hwɛ bio a, wubehu sɛ nea na Yesu reka ne sɛ, Onyankopɔn dɔ na ɛbɛma nnipa anya daa nkwa. Nanso ose gye sɛ yɛyɛ dɛn ansa?
Tony: Gye sɛ yenya gyidi.
Alfred: Ampa. Gye sɛ yenya ne Ba Yesu Kristo a ɔwoo no koro no mu gyidi. Yɛreka yi nyinaa, Yesu mu gyidi a ɛma obi nya daa nkwa no, ɛho asɛm mpo wɔ nhoma a mede brɛɛ wo no mu o; ɛwɔ kratafa 2. Ɛhɔ na yehu nea enti wɔyɛɛ Ɔwɛn-Aban no. Ɛka sɛ: “Nsɛmma nhoma yi ma nnipa nya Yesu Kristo mu gyidi. Ɔno na owui sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya daa nkwa, na seesei ɔno ne Onyankopɔn Ahenni no so hene.”
Tony: Wo ara hwɛ o. Sɛɛ mo nhoma no mpo aka sɛ Yehowa Adansefo gye Yesu di.
Alfred: Saa pɛpɛɛpɛ.
Tony: Ɛnde adɛn na nkurɔfo ka sɛ munnye Yesu nni?
Alfred: Ɛnyɛ ade biako na ɛma nkurɔfo ka saa. Ebinom wɔ hɔ a, te a wɔte sɛ nkurɔfo keka saa nti na wɔn nso wɔka bi. Ebinom nso de, wɔn asɔfo na ama wɔanya saa adwene no.
Tony: Ebi nso a, nea ɛma nkurɔfo ka sɛ munnye Yesu nni ne sɛ, muse moyɛ Yehowa Adansefo; monka sɛ moyɛ Yesu Adansefo.
Alfred: Ebetumi aba saa.
Tony: Adɛn nti na motaa ka Yehowa ho asɛm saa?
“MAMA WƆAHU WO DIN”
Alfred: Ade biako nti a yɛyɛ saa ne sɛ, yegye di sɛ ɛho hia sɛ yɛde Onyankopɔn din Yehowa ankasa frɛ no sɛnea ne Ba Yesu yɛe no. Ma yɛnhwɛ nea Yesu ka kyerɛɛ n’Agya wɔ mpaebɔ mu. Ɛwɔ Yohane 17:26. Wubetumi akenkan ama me?
Tony: Yoo. “Mama wɔahu wo din na mɛma wɔahu, na ɔdɔ a wode dɔɔ me no atena wɔn mu na matena wɔn mu.”
Alfred: Woayɛ ade. Woahu nea Yesu kae? Ose wama wɔahu Onyankopɔn din. Wohwɛ a, dɛn nti na ɔyɛɛ saa?
Tony: Aa, mitumi hu mpo?
Yesu mu gyidi ho hia paa, efisɛ obi annye no anni a, ɔrennya nkwa
Alfred: Wiɛ, ma yɛnhwɛ Bible mu asɛm foforo a ɛbɛma yɛahu asɛm no ani so. Kyerɛwsɛm a aba me tirim ne Asomafo Nnwuma 2:21. Ɛhɔ kenkan sɛ: “Obiara a ɔbɛbɔ Yehowa din afrɛ no no, wobegye no nkwa.” Wunnye nni sɛ, na Yesu nso nim sɛ Yehowa din a obi bɛbɔ na ɛbɛma wanya nkwa?
Tony: Ɛnyɛ dɛn ara a, na onim.
Alfred: Enti, Onyankopɔn din no, ade biako nti a na Yesu pɛ sɛ n’asuafo no hu na wɔde di dwuma ne sɛ na wɔn nkwagye gyina so. Ɛno ka ho bi paa nti na yɛtaa bɔ Yehowa din saa no. Yegye di sɛ ɛho hia sɛ yɛma afoforo hu Onyankopɔn din na wɔn nso bɔ saa din no.
Tony: Sɛ obi nnim Onyankopɔn din anaasɛ wammɔ a, sɛ ɛnyɛ hwee? Nea ehia ara ne sɛ onipa no behu sɛ Onyankopɔn na ɔreka ne ho asɛm.
Alfred: Ɛwom saa. Nanso Onyankopɔn din a wama yɛahu no ma ɛyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛbɛn no.
Tony: Worepɛ akyerɛ sɛn?
Alfred: Wo de, hwɛ o, obi te sɛ Mose sei, yennim ne din a sɛ anka ɛnyɛ hwee? Sɛ yɛreka ne ho asɛm a, anka yebetumi afrɛ no ɔbarima a ɔpaee Po Kɔkɔɔ no mu anaa ɔbarima a Onyankopɔn de Mmara Nsɛm Du maa no no. Noa nso saa ara; sɛ yɛanhu ne din a, sɛ anka ɛnyɛ hwee? Sɛ yɛreka ne ho asɛm a, anka yebetumi aka sɛ ɔbarima a ɔyɛɛ adaka de gyee n’abusua ne mmoa nkwa no. Yesu Kristo nso, sɛ yennim ne din a, sɛ anka yebetumi afrɛ no ɔbarima a yɛn bɔne nti ofi soro baa asase so bewu maa yɛn no, anaa meboa?
Tony: Ɛyɛ me saa.
Alfred: Nanso Onyankopɔn hyɛɛ da ma wɔkyerɛw wɔn nyinaa din sɛnea ɛbɛyɛ a yebehu. Biribiara nni hɔ a ɛma yetumi bɛn obi sen sɛ yebehu ne din ankasa. Mose, Noa, ne Yesu—yenhyiaa wɔn mu biara da, nanso wɔn din a yenim nti, ɛma yɛte nka sɛ yenim wɔn.
Tony: Ampa o, mennwenee ho saa da.
Alfred: Ɛno nso ne ade biako nti a Yehowa Adansefo taa de Onyankopɔn din yɛ adwuma saa. Yɛpɛ sɛ yɛboa nnipa ma wonya Yehowa Nyankopɔn mu gyidi, na wohu no sɛ obi a ɔwɔ hɔ ankasa a wobetumi abɛn no. Nanso ɛno nkyerɛ sɛ yebu yɛn ani gu Yesu so. Yenim sɛ odi akoten wɔ yɛn nkwagye mu. Ma yɛmfa kyerɛwsɛm biako nka ho mma asɛm yi mu nna hɔ.
Alfred: Yɛadi kan akenkan Yohane 14:6. Kae sɛ Yesu kaa sɛ ɔno ne “ɔkwan no ne nokware no ne nkwa.” Yɛnsan yɛn akyi kakra nkɔhwɛ Yohane 14:1. Mesrɛ wo, wonkan asɛm a Yesu ka twaa to wɔ hɔ no?
Tony: OK. Ɛhɔ se: “Munnya Onyankopɔn mu gyidi, munnya me nso me mu gyidi.”
Alfred: Mo! Nea Yesu kae yi, wohwɛ a ɛkyerɛ sɛ wugye Yesu di a, wuntumi nnye Yehowa nso nni anaa?
Tony: Dabi. Yesu kae sɛ ɛsɛ sɛ yegye wɔn baanu nyinaa di.
Alfred: Saa na ɛte. Migye di sɛ wo ne me bɛyɛ adwene sɛ, yɛn ano kɛkɛ a yɛde bɛka sɛ yɛwɔ Onyankopɔn ne Yesu mu gyidi no ara nnɔɔso. Nea ehia paa ne sɛ yɛde yɛn abrabɔ bɛkyerɛ sɛ yɛwɔ wɔn mu gyidi ampa.
Tony: Ɛyɛ nokware paa.
Alfred: Nanso dɛn na obi yɛ a, ɛbɛkyerɛ sɛ ɔwɔ Onyankopɔn ne Yesu mu gyidi ampa? Akyiri yi, yebetumi asusuw saa asɛm no ho. *
Tony: M’ani begye ho saa.
Bible mu asɛm bi wɔ hɔ a ɛkyere w’adwene anaa? Yehowa Adansefo nkyerɛkyerɛ ne wɔn som mu nneɛma bi wɔ hɔ a wopɛ sɛ wote ase yiye anaa? Sɛ saa a, bere biara a wubehyia Yehowa Dansefo bi no, mma ɛnnhaw wo sɛ wubebisa no. N’ani begye ho sɛ ɔne wo bɛbɔ saa nsɛm no ho nkɔmmɔ.
^ nky. 60 Sɛ wopɛ nsɛm pii a, hwɛ nhoma a wɔato din Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? no ti 12. Yehowa Adansefo na wotintimii.
Wubetumi Afa Onyankopɔn Adamfo
Yebetumi ayɛ nea ɛsɔ Yehowa ani. Wubetumi ayɛ n’adamfo.
ASƐM A ƐDA SO Ebi Tumi Ba Mu, Nanso Nea Ɛmma Mu na Ɛdɔɔso
ASƐM A ƐDA SO Daakye Asɛm​—Hena na Onim?
YEHOWA DANSENI BI NE OBI BƆ NKƆMMƆ Enti Yehowa Adansefo Gye Yesu Di?
SUASUA WƆN GYIDI Nkrante Antumi No
Onyankopɔn Adwene na Ɛwɔ Bible Mu Anaa?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN May 2014 | Daakye Asɛm—Hena na Onim?
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN May 2014 | Daakye Asɛm—Hena na Onim?
May 2014 | Daakye Asɛm—Hena na Onim?
ƆWƐN-ABAN May 2014 | Daakye Asɛm—Hena na Onim?
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Yɛkae Yesu Wuo No?
Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Woyɛ Bible Mu Nhwehwɛmu?
Bere Bɛn na Onyankopɔn Ahenni Fii Ase Dii Tumi? (Ɔfã 2)
Bere Bɛn na Onyankopɔn Ahenni Fii Ase Dii Tumi?—Ɔfã 1